PSC (Portable Software Center) ento mody any an-tranonao | Avy amin'ny Linux
Ento mody any an-tranonao ny PSC (Portable Software Center)
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | fampiharana, soso-kevitra
Vondronà mpamorona iray avy amin'ny ICU (University of Computer Science of Cuba) volana vitsivitsy lasa izay dia nandrafitra rindrambaiko iray izy ireo tao Python antso Repoman CLI, rindrambaiko natao hamoronana tahiry fampiharana natokana ho azy.
Ity dia fomba hafa iray hafa amin'ny fomba apetratsika Ity lahatsoratra ity mamorona repository manokana ary mitondra azy ireo any amin'ny toerana tsy ahafahanao miditra Internet.
Raha ny filazan'ny mpanoratra azy manokana:
Rehefa ampidirina ao amin'ny tahiry natokana ho azy ny rindranasa, i Repoman dia misintona ny fiankinan-doha rehetra avy amin'ny tahiry napetraky ny PC izay andehanany; avy eo ny repository manokana dia azo afindra amin'ny fitaovana rehetra ary ampiasaina amin'ny PC hafa izay tsy manana fidirana amin'ny repo ofisialy. Repoman dia mamela ihany koa ny fanesorana ireo rindranasa ao amin'ny trano firaketana manokana, rehefa mitranga izany dia manala ireo fiankinan-doha rehetra izay tsy ampiasain'ny rindranasa hafa.
Eny ary, PSC iray ihany io Ny tendrony aloha for Repoman, izany hoe, interface graphique. Ity fampiharana ity dia ao amin'ny 0.2 version, izay manamboatra bug ary manampy fanatsarana:
Ny sivana isaky ny fizarana dia nampiana izay manamora ny fikarohana.
Nanampy fikarohana tamin'ny alàlan'ny autocomplete.
Ankehitriny dia mampiseho ny fanovana hatao rehefa mametraka sy manaisotra fampiharana iray.
Ankehitriny ny mpampiasa dia afaka mijery vaovao momba ny fonosana iray.
Ny lesoka fanamarinana dia namboarina.
Ny motera repoman dia namboatra tamin'ny alàlan'ny algorithm famaritana fiankinan-doha, izay amin'ny tranga sasany dia tsy nampidina ny fiankinan-doha rehetra.
Ny motera repoman dia nahitsy ny firafitry ny tahiry namorona, ankehitriny mamorona ny repositories miaraka amin'ny firafitra kilasika.
Ny fampiharana dia novolavolaina mba hiasa amin'ny repositories an'ny Ubuntu y Debian (amin'ny sary) ary azon'izy ireo alaina PSC avy amin'ny Ity rohy ity.
Ahitana boky torolàlana ho an'ny mpampiasa ao anaty ilay rakitra. Raha te hitatitra izay lesoka na manome tolo-kevitra dia azonao atao ny mankamin'ny pejin'ny tetikasa (any Kiobà) na manorata any rreynaldo [amin'ny] mpianatra [teboka] uci [teboka] cu o cccaballero [amin'ny] mpianatra [teboka] uci [teboka] cu. Rehetra Fanamarihana fa avelan'izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra dia halefanay any amin'ny developer ihany koa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ento mody any an-tranonao ny PSC (Portable Software Center)
Fampiharana mahaliana, ohatra tsara dia ny fametahana indray ireo vondrona misy programa amin'ny solosaina maro, raha tsy mandany bandwidth sy tsy mahatratra an'io asa io ao anatin'ny fotoana fohy, ity manaraka ity dia fanavaozana, saingy tsy mino aho fa miova miaraka daholo ny tranomboky rehetra. , hehe, Manomeza vonjy amin'ny tetikasa 😀
Tongasoa eto Taregon 😀
Hitako izao fa nivoaka i Repoman, 1.3 manana 779.7 Kb fotsiny ary ilay teo aloha napetrak'izy ireo tamin'ity lahatsoratra ity dia 3,3 Mb. Inona no maha samy hafa azy?
Tsy dia fantatro loatra, fa ny kaody sy ny habaka dia azo nohamarinina tamin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitahirizam-bokin'ilay rafitra manokana, fa tsy ampidirina amina rakitra bebe kokoa ao amin'ny installer.
Miarahaba ireo namorona an'ity hevitra ity. Tsy ny olon-drehetra no afaka miditra amin'ny Internet, ankoatr'izay dia manakaiky ny Linux amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana na amin'ny solosaina tsotra izay tsy misy fifandraisana izany.
Misaotra anao! io dia mieritreritra ny REHETRA.
LEHIBE! Tsy mbola mahatratra ny ankamaroan'ny solosaina ny Internet.
Rene Sanchez dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, nitady repoman aho izay niasa tsara tamin'ny linuxmint 17 ary tsy nisy. Mandra-pahitako izay mandeha tsara, misaotra betsaka… ..
Valiny tamin'i Rene Sanchez
ePDFView: mpijery PDF maivana
Tantano ny tambajotra sosialy sy ny Microblog-nay miaraka amin'ny FireStatus